Yakabudirira Nyaya - Shanghai Bohua Security Equipment Co, Ltd.
Shanghai Bohua chengetedzo michina Co, Ltd. yawana ISO 9001: 2015 mhando manejimendi system sisitimu, ISO14001: 2004 manejimendi manejimendi system, OHSAS18001: 2007 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system, Shanghai "AAA" chikwereti bhizinesi uye Shanghai chemberi tekinoroji bhizinesi.
Iyo washer yemaziso yakasimbiswa neAmerican ANSI z358.1-2014, European en60335-12012 + a11: 2014 uye China Classification Society; iyo mask yakasimbiswa ne gb2626-2006 kn95 uye European Union FFP2 munguva yedenda; chipfeko chekudzivirira chekurapa chakasimbiswa ne en 14126: 2003 / AC: 2004.
Zvigadzirwa zvekambani zvakatumirwa kuRussia, United States, Japan, Kazakhstan, Middle East, Africa nedzimwe nyika. Mutengesi wePetroChina neSinopec, uye inopa zvigadzirwa kune vatengi mu petroleum, kemikari, chikafu nechinwiwa, mishonga, kuvaka ngarava, zvemagetsi, simba rezuva nemamwe maindasitiri. Iyo ine vanopfuura zviuru zvina zvevadyidzani, kusanganisira mashandiro emakesi makuru eChina nyika uye epasirese anozivikanwa zvigadzirwa sePetroChina, Sinopec, Coca Cola, Shell lubricants, Honeywell, nezvimwe.
Iyo kambani ine ruzha R & D, kugadzirwa, kushambadzira, sevhisi manejimendi system, ine matarenda, tekinoroji, zviwanikwa, ruzivo uye zvimwe zvakanakira zvakanakira, kukupa iwe yemhando yepamusoro, yakachengeteka uye inokwikwidza zvigadzirwa; isu tichaedza zvisingaite kukupa iwe mhando-yepamusoro, yakakwana uye yakachengeteka zvigadzirwa nemasevhisi.